पर्वतीय संग्रहालयः टिकटबाट रु. अढाइ करोड आम्दानी - पर्वतीय संग्रहालयः टिकटबाट रु. अढाइ करोड आम्दानी
पर्वतीय संग्रहालयः टिकटबाट रु. अढाइ करोड आम्दानी
२०७४, २० श्रावण, 12:17:24 PM
२० साउन, काठमाडौं। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–१७ रातोपैह्रामा सञ्चालित अन्तरराष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयले एक वर्षका अवधिमा टिकट बिक्रीबाट करिब रु अढाइ करोड आम्दानी गरेको छ ।
नेपाल पर्वतारोहण संघद्वारा निर्माण गरी सञ्चालमा ल्याइएको सो संग्रहालयमा अघिल्लो आवको तुलनामा यस वर्ष करिब रु एक करोड १४ लाख बढी आम्दानी भएको संयोजक सन्तवीर लामाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण अघिल्लो वर्ष क्रमशः ४७ हजार ७६४, ६० हजार ६८२, छ हजार ६२०, १२ हजार ५८३ र दुई हजार १३१ जनाले अवलोकन गर्दा करिब रु एक करोड ३२ लाख आम्दानी भएको थियो ।
विसं २०६० माघ देखि सञ्चालित संग्रहालयमा २०७३ साल कात्तिक ११ गते इतिहासमै सबैभन्दा बढी विद्यार्थीले अवलोकन गरेको दिन हो । उक्त दिन तीन हजार २५३ विद्यार्थीसहित तीन हजार ८२७ जनाले टिकट काटेर अवलोकन गर्दा रु दुई लाख पाँच हजार ८०० आम्दानी भएको लामाले बताए ।
हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको जनजीवन झल्कने सामग्री प्रदर्शन गरिएको संग्रहालयका प्रमुख बलप्रसाद राईले बताए । उनका अनुसार पोखरा आउने आन्तरिक एवम् बाह्य पर्यटकका लागि थप गन्तव्य बनेको संग्रहालय अवलोकनका लागि विद्यार्थीलाई रु ४० र सर्वसाधारण नेपालीका लागि रु ८० प्रवेश शुल्क लाग्नेछ ।
अन्तरराष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयको स्थापना कालदेखि हालसम्म विद्यार्थी सात लाख ३१ हजार ५६०, सर्वसाधारण नेपाली पाँच लाख १२ हजार ८५१, सार्कका एक लाख १७ हजार ५८६, बाह्य एक लाख ९१ हजार ८९८ र बगैँचातर्पm १३ हजार ५६७ जनाले टिकट काटेर अवलोकन गर्दा करिब रु १३ करोड ४२ लाख आम्दानी भएको संग्रहालयका कार्यकारी अधिकृत ऋषि पौडेलले जानकारी दिए ।